Ungagqoka kanjani eDubai | Izindaba Zokuhamba
Ugqoka kanjani eDubai
UMariela Carril | | Amathiphu, I-United Arab Emirates
I-Los I-United Arab Emirates Bayiqembu lama-emirates futhi phakathi kwabo kukhona Dubai. Isikhathi esithile manje, sekuthandwa kakhulu ngokwakhiwa kwaso okuphikisana nomcabango nangokuba nesikhumulo sezindiza esikhulu kunazo zonke futhi esihle kunazo zonke emhlabeni, ngakho-ke futhi ithole ezokuvakasha eziningi.
Kepha iDubai iyi- izwe lamaSulumaneNjengokuvakasha nakwamanye amazwe njengoba sekwenziwe, ngakho-ke kunezindlela ezithile zokugqoka umuntu okufanele azihloniphe. Namuhla sizohlangana nabo, ngakho-ke i-athikili imayelana ugqoka kanjani eDubai.
2 Ugqoka kanjani eDubai
Njengoba ngishilo, i-emirate, inhlokodolobha yayo idolobha elinegama elifanayo, ayi ogwini lwePersian Gulf edumile necebile. Igatsha lolwandle lingena linqamule edolobheni. Lokhu kusondela olwandle kwaholela izakhamizi zala mazwe ukuthi zinikele ekulimeni nasekuhwebeni ngamaparele. Ngenxa yendawo eyayikuyo, ngisho nangaphambi kokutholakala kukawoyela, kwakuyinsimu eyayifunwa kanjalo yayazi ukuthi isezandleni zaseBrithani iminyaka engama-200.
Fue ngawo-60 lapho i-emirate ithola izinkambu zayo ezicebile zikawoyela kwathi eminyakeni eyishumi kamuva wajoyina nabanye ukubumba i-United Arab Emirates. Unjani uhulumeni wakho njengamanje? Kuyindlela ye- ubukhosi bomthethosisekelo. Ayinabantu abaningi nanamuhla inqwaba yabantu bayo ingeyangaphandle, abantu abahlala lapho ngamabhizinisi noma abokufika abasebenza emkhakheni wezokwakha nezinye izinsizakalo.
IDubai ayinawo uwoyela omningi njengabomakhelwane bayo, ngakho-ke yebo noma yebo icabanga ukwehlukanisa umsebenzi wayo wezomnotho, yingakho itshale imali enkulu ekuqhakambiseni ezokuvakasha.
Sibuyela emuva ekuqaleni: kuyisimo samaSulumane ngakho labo abanenkinga kakhulu ngabesifazane basentshonalanga ejwayele ukugqoka izimpahla ezikahle nezikhanyayo ezindaweni ezishisayo.
Kuyiqiniso futhi ukuthi awekho amazwe amabili amaSulumane ayafana nokuthi kwesinye isikhathi kwelinye noma kweminye imithetho iba buthakathaka kakhulu, ikakhulukazi kwabokufika. Empeleni, uze ubone ukuthi umthetho unjani, kuyalulekwa ukuthi uzilungiselele ukumboza izingalo nemilenze nekhanda lakho, ezindaweni ezithile. Okungukuthi, gqoka imikhono emide, amabhulukwe amade futhi iduku elibanzi eliseduze njalo.
Manje, idolobha laseDubai yidolobha lesimanje futhi alivaliwe kangako ngokwezingubo, phela baningi abantu bokufika. Ngakho-ke, uzobona zonke izinhlobo zezingubo, kusuka kuma-shorts kuya kuma-burkas aphelele. Ngemuva kwalokho, emahhotela, ezindaweni zokudlela nasezitolo, izindawo lapho kungenzeka khona ukuhlangana nabantu bendawo kanye nabokufika ngokufanayo, kulula hlonipha umboze amaqakala namahlombe.
Uma ungenanhloso yokulandela isisho esidala "Lapho uya khona yenza okubonayo" Lezi yizindawo lapho uzoba nenkinga encane khona. Ikakhulukazi uma uthatha uhambo ngaphandle kweRamadan. Uma uthatha isinqumo sokuyodla isidlo sakusihlwa endaweni enhle ngokwengeziwe, lapho-ke kufanele ugqoke izingubo ngaleso sikhathi sesimo.
Nolwandle? Ngemuva kwalokho izingubo zasolwandle zigqokwa olwandle kuphela. Lapha awukwazi ukwenza lokho umuntu akwenzayo kaningi ezindaweni ezingasolwandle, ukugqoka isudi yokugeza usuku lonke noma ukuhlala eflip-flops usuku lonke. Manje olwandle ungagqoka ukubhukuda okukodwa, ibhikini... kokubili olwandle nasemachibini okubhukuda nasemapaki amanzi. Kusobala, akukho ubunqunu noma imicu.
Kodwa kulezi zindawo, okungukuthi, uma uhamba ibanga ukuya esifundeni esidala kunazo zonke eDubai, uma uvakashela izimakethe zendabuko noma i-mosque ngaleso sikhathi kufanele uqaphele. Futhi kungukuthi ngokushesha ngeke uzizwe emhlabeni wakho kepha phesheya. Abantu bendawo namasiko abo bazokuzungeza maduzane ngakho kufanele ube nenhlonipho. Uma ufuna ukugwema ukubheka noma ukuphawula, ongakuqondi ngokuqinisekile kepha nabo bazokwenza okufanayo, kungcono uqaphele.
Endabeni yokuhamba ukuvakashela i-mosque, abanye bavumela ukuvakashelwa ngabantu abangewona amaSulumane, bobabili abesilisa nabesifazane kufanele bahambe bembozwe imilenze nezingalo. Abanye baze babe nezingubo ezengeziwe, uma kwenzeka ungaphumi ehhotela ugqoke kanjalo.
Manje enye indawo edumile eDubai ugwadule. Kunezinkambo eziningi ezivakashelwa ogwadule futhi kungcono ukuthi uzenze ngoba zizinhle. Uma kunjalo kuhlale kutuswa ukugqoka amabhulukwe, izikhindi noma capri ibhulukwe (Futhi lezo ongazikhipha uhhafu womlenze), kanye nesisindo semisipha, ihembe noma ihembe. Futhi-ke, i-sunscreen nesigqoko.
Emini ugwadule luyashisa kakhulu futhi ukugqoka izingubo ezikumboza kakhulu kuyindlela engcono kakhulu ongayenza angashiswa. Kungabanda, kuya ngesikhathi sonyaka, kungahle kube ukuthi uhamba ebusuku, ngakho-ke kungakuhle ukuthi ulethe vala izicathulo.
Uma abesifazane bengakwazi ukukhombisa isifuba, izingalo namathanga, nabesilisa abakwazi ukuhamba benqunu esifubeni, noma ngezikhindi ezimfishane kakhulu noma ukubhukuda okulingisa okukodwa. Azikho iziketi ezincane, izikhindi ezimfushane, iziqongo, okusobala, akukho nokusikisela kwezingubo zangaphansi. Futhi ngaphezu kwakho konke, ungathukutheli uma zidonsela ukunaka kwethu.
Yini iphuzu lokuxoxa ngekhodi yokugqoka noma isimilo sesiko okungelona elethu? Akukho esizokushintsha futhi siyadlula, ngakho-ke uma ngephutha sicasula othile futhi asidonsele amehlo, kufanele sixolise. Akekho ofuna ukufaka amaphoyisa, ngakho-ke kwanele ukuba nesimo sengqondo esifanele.
Ngakho-ke, kufinyezwa i- amaphuzu ayisisekelo wokuthi ugqoka kanjani eDubai: Ezikhaleni zomphakathi ezithandwa kakhulu, abesifazane akudingeki ukuthi bavale amakhanda abo, yebo emaSulumeni, kufanele bavale amahlombe abo okungenani emadolweni, kungabi nezingubo ezincane, izikibha kumele babe nemikhono emifushane, yebo ungagqoka ibhikini, ijini , yize akukho okwembula kakhulu. Yebo ebusuku, kepha ngaso sonke isikhathi siphethe ijazi esiseduze ukumboza esikudalulayo. Ezindaweni ezingokwesiko eziningi lapho sihamba simbozwe kakhulu, kungcono, kuyafana uma siya esakhiweni sikahulumeni.
Futhi amadoda? Banakho kube lula, kepha kusafanele ukwazi izinto ezimbalwa: bangahamba ngezikhindi ezingafushane kakhulu, yize kungejwayelekile, futhi yebo kumele babe ngamavila, ayikho i-vibe yebhayisikili, izembatho zemidlalo uma wenza ezemidlalo, uma kungenjalo akulungile, uma uya esontweni lamaSulumane kufanele ugqoke amabhulukwe amade ...
Ngabe kukhona okwenzekayo uma ngingakuhloniphi okunye kwalokhu? Ungasukela ekwamukeleni ezinye ukuphawula okunokhahlo, ngidlula ku ukubukeka kabi kuze kube kufanele ubhekane ne- iphoyisa futhi i ijele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amathiphu » Ugqoka kanjani eDubai
Yini ongayibona ku-Picos de Europa
Imvunulo yesifunda saseGalician